China fiberglass yokwaluka ezihamba abenzi kunye nabathengisi | Beihai Fibreglass
Fibreglass olukiweyo ezihambayo
Ilaphu le-1.Bidirectional eyenziwe ngokusonta ngokuthe ngqo.
2.Iyahambelana neenkqubo ezininzi nentlaka, ezifana ipholiyesta unsaturated, IVinyl ester, epoxy kunye nentlaka phenolic.
Isetyenziswa ngokubanzi kwimveliso yeenqanawa, iinqanawa, inqwelomoya kunye neenxalenye zemoto njl.
E-Glass ephothiweyo Rovings ukuba ilaphu eya kumacala amabini eyenziwe interweaving rovings ngqo.
E-Glass womluki Rovings iyahambelana iinkqubo ezininzi intlaka, ezifana ipholiyesta unsaturated, IVinyl ester, epoxy kunye nentlaka phenolic.
I-E-Glass yokwaluka ehambayo yinkqubo ephezulu yokuqiniswa esetyenziswa ngokubanzi ngesandla kunye neenkqubo zerobhothi zokuvelisa izikhephe, iinqanawa, inqwelomoya kunye neenxalenye zemoto, ifanitshala kunye namaziko ezemidlalo.
Ukuhamba kwe-1.Warp kunye ne-weft kulungelelaniswe ngokuhambelana kunye neflethi
indlela, ekhokelela kuxinzelelo olufanayo.
Iintsinga ezi-2 ezilungelelaniswe kakuhle, zikhokelela kubungakanani obuphezulu
uzinzo nokwenza ukuphatha lula.
3.Ukulunga kwesikhunta, ukukhawuleza kunye nokugqiba okumanzi kwi-resins,
kukhokelela kwimveliso ephezulu.
Ukungafihli 4.Good namandla aphezulu kwiimveliso ezidityanisiweyo.
Ukuxinana kweWarp Kuphela / cm
Ukuxinana kwe-Weft kuyaphela / cm
Ubunzima be-Areal g / m2
Umxholo onokutsha (%)
WRE300 600 600 32 18 Ngama-296-328 0.4-0.8
WRE800 1200 * 2 1200 * 2 20 15 Ngama-800-880 0.4-0.8
Ukubalulwa ngokukodwa kunokuba yimveliso ngokweemfuno zabathengi.
Ukurhawuka ngakunye kwenzelwe inxeba kwityhubhu yephepha enobubanzi obungaphakathi kwe-76mm kunye nomqengqelo onobubanzi obungu-220mm. Iroli yokuluka esongwayo isongelwe ngefilimu yeplastiki, emva koko ipakishwe kwibhokisi yekhadibhodi okanye isongelwe ngephepha lekraft. Imiqulu ingabekwa ngokuthe tye. Ukuhamba, iiroli zinokulayishwa kwikhenkethi ngqo okanye kwiipelethi.
Ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela, kufanele igcinwe kwindawo eyomileyo, epholileyo kunye nobungqina bemvula. Kuyacetyiswa ukuba ubushushu begumbi kunye nokufuma kufuneka kuhlala kugcinwa kwi-15 ℃ ～ 35 ℃ kunye ne-35% ～ 65% ngokwahlukeneyo.
I-MOQ: 20000kg / 20'FCL
Ukuhanjiswa: kwiintsuku ezingama-20 emva kokufunyanwa kwerisithi
Ukupakisha: 40kgs / roll, 1000kgs / pallet.
Egqithileyo I-E-iglasi bahlanganisana befuna ukulahla icentrifugal - Beihai fiberglass
Okulandelayo: Ifayibha yeglasi yokugubungela iTissue Mat
Ukuhamba ngokuthe ngqo kwi-CFRT
Imisonto emanzi egawuliweyo
I-E-iglasi ehlanganisene ukujikeleza i-GMT